Zanu-PF Yotambira Kuumbwa kweHurumende yeMubatanidzwa
Ndira 29, 2009
Dare repamusoro soro reZanu-PF rePolitiburo, neChitatu rakatambira zvisungo zveSADC panyaya yekuumbwa kwehurumende yemubatanidzwa muZimbabwe, kunyange hazvo masangano akawanda nedzimwe nyika dzisiri kufara nedanho iri.
National Council yeMDC iri kutarisirwawo kuzeya nyaya iyi neChishanu kuitira kuti ibude nechisungo chekuti yopinda here kana kuti muhurumende yemubatanidzwa zvayaida zvisati zvagadziriswa. MDC yakati inoda kuti nyaya yemagavhuna pamwe nekugovanwa nemazvo kwevamiriri veZimbabwe kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weAmerica, VaBarack Obama, neChitatu vakaudza mutungamiri weSouth Africa, VaKgalema Motlanthe, kuti vagadzirise dambudziko remuZimbabwe sezvo vanhu vari kuramba vachiyaura munyika.
Ukuwo vanoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana, VaPhandu Sikelemani, vanoti chinopedza matambudziko muZimbabwe inyaya yesarudzo chete idzo dzinofanirwa kuitwa negwara kwaro, uye vanhu vakasununguka, kwete zvehurumende yemubatanidzwa.
VaChris Mutsvangwa vari mukomiti inoona nezve kuburitswa kwemashoko muZanu-PF. VaMutsvangwa vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti zvakaitwa nebato ravo zvakakosha.
Panyaya yezvakabuda pamusangano weSADC, masangano evashandi anoti reCOSATU neZCTU neChina, vakaita musangano nevatori venhau muJohannesburg, akati haasi kutambira nyaya yehurumende yemubatanidzwa.
VaWellington Chibebe ndivo munyori mukuru weZCTU. VaChibebe vanoti panofanira kuitwa sarudzo itsva munyika, kwete kuti vanhu vapane masimba pachavo.
Hurukuro naVaWellington Chibebe